Soo saare wax kaabayaasha fayoobaanta - cudurka Alzheimers
Wisepowder waxay leedahay noocyo kala duwan oo ceyriin ah oo cudurka Alzheimers ah, waxayna leedahay wadar guud oo ah habka maaraynta tayada.
Budada Monosialotetrahexosyl ganglioside Sodium (GM1) budada (Pig Brain) (37758-47-7)
Cudurka Alzheimers waa nooc horusocod ah ee waallida. Waallida waa erey ballaaran oo loogu talagalay xaaladaha ay sababaan dhaawacyada maskaxda ama cudurrada si xun u saameeya xusuusta, fikirka, iyo dhaqanka. Isbeddeladani waxay faragelinayaan nolol maalmeedka.
Sida laga soo xigtay Ururka Alzheimers, cudurka Alzheimers wuxuu keenaa boqolkiiba 60 illaa 80 kiisaska waallida. Dadka badankood ee cudurka qaba waxaa lagu ogaadaa da'da 65. Haddii la ogaado kahor waqtigaas, guud ahaan waxaa loo yaqaan bilowga hore ee cudurka Alzheimers.
Sababaha Cudurka Alzheimers
Sababta (yada) cudurka Alzheimers waa (lama yaqaan). "Amyloid cascade hypothesis" waa fikradda ugu ballaaran ee laga wada hadlay oo la baaray ee ku saabsan sababta cudurka Alzheimers. Xogta ugu xoogga badan ee taageerta mala awaalka 'amyloid cascade hypothesis' waxay ka timaaddaa daraasadda cudurka bilowga hore ee hiddo-wadaha (hiddo-wadaha) Alzheimers. Isbedelo la xiriira cudurka Alzheimers ayaa laga helay qiyaastii kala bar bukaanada qaba cudurka bilowga hore. Dhammaan bukaanadan, isbeddelku wuxuu u horseedaa wax soo saar xad dhaaf ah maskaxda nooc gaar ah oo jajab yar oo borotiin ah oo la yiraahdo ABeta (Aβ). Seynisyahanno badan ayaa rumeysan in inta badan xaaladaha goosgooska ah (tusaale ahaan, kuwa aan la iska dhaxlin) ee cudurka Alzheimers (kuwani ay yihiin kuwa ugu badan ee dhammaan kiisaska cudurka Alzheimers) waxaa aad u yar ka saarista borotiinkan Aβ halkii laga soo saari lahaa wax badan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, in badan oo ka mid ah cilmi-baarista lagu raadinayo siyaabo looga hortago ama loo yareeyo cudurka Alzheimers ayaa diiradda saarey qaababka lagu dhimi karo qadarka Aβ ee maskaxda ku jira.
Calaamadaha cudurka Alzheimers
Qof kastaa wuxuu leeyahay dhacdooyin illooba waqti ka waqti. Laakiin dadka qaba cudurka Alzheimers waxay muujiyaan dabeecado iyo astaamo gaar ah oo socda oo ka sii daraya waqtiga. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara:
luminta xusuusta oo saameyn ku yeelata waxqabadyada maalinlaha ah, sida awood u lahaanshaha ballamaha
dhib ku ah howlaha la yaqaan, sida isticmaalka microwave-ka
dhibaatooyinka xalinta dhibaatooyinka
dhib hadalka ama qoraalka
jahwareer ku saabsan waqtiyada ama meelaha
xukunku wuu yaraaday
nadaafadda shaqsiyeed oo yaraatay
niyadda iyo dabeecadda qofka ayaa is beddela
ka noqoshada asxaabta, qoyska, iyo bulshada
Calaamadaha cudurka Alzheimers waxay isu beddeli doonaan hadba heerka cudurka.
Ma jiro daawo la yaqaan oo loogu talagalay cudurka Alzheimers, daaweynta la heli karo waxay bixisaa waxtar yar oo astaamo ah laakiin waxay ku sii jirtaa dabeecadda.
Daaweynta cudurka Alzheimers wuxuu ka kooban yahay daawo ku saleysan iyo mid aan dawo lahayn oo ku saleysan. Laba qaybood oo kala duwan oo dawooyinka ah ayaa laga ansixiyay FDA si loogu daaweeyo cudurka Alzheimers: kahortagayaasha loo yaqaan 'cholinesterase inhibitors' iyo 'antagonistayaasha' glutamate qayb. Noocyada daroogada midkoodna looma xaqiijin inuu yareeyo heerka horumarka cudurka Alzheimers. Si kastaba ha noqotee, tijaabooyin badan oo caafimaad ayaa soo jeedinaya in daawooyinkani ay ka sarreeyaan placebos (kaniiniyada sonkorta) si loo yareeyo astaamaha qaarkood.
Daaweynta Ku Salaysan Daawada
Itors Xakameeyayaasha Cholinesterase (ChEIs)
Bukaannada qaba cudurka Alzheimers waxaa ku yar ehelka neurotransmitter kiimiko ee loo yaqaan acetylcholine. Cilmi-baaris muhiim ah ayaa muujisay in acetylcholine ay muhiim u tahay awoodda sameynta xusuus cusub. Kahortagayaasha cholinesterase (ChEIs) ayaa xannibaya burburka acetylcholine. Natiijo ahaan, acetylcholine badan ayaa laga heli karaa maskaxda, waxaana laga yaabaa inay sahlanaato sameynta xusuus cusub.
Afar ChEIs ayaa ogolaaday FDA, laakiin kaliya dopezil hydrochloride (Aricept), rivastigmine (Exelon), iyo galantamine (Razadyne - oo horey loo oran jiray Reminyl) ayaa isticmaala dhakhaatiirta badankood maxaa yeelay daroogada afaraad, tacrine (Cognex) waxay leedahay waxyeelo aan fiicnayn marka loo eego saddexda kale. Inta badan khubarada ku xeel dheer cudurka Alzheimers ma aaminsana inuu jiro farqi muhiim ah oo u dhexeeya waxtarka seddexdaan daawo. Daraasado dhowr ah ayaa soo jeedinaya in horumarka astaamaha bukaanjiifka dawooyinkan ay u muuqato inuu yahay mid taag daran muddo lix ilaa 12 bilood ah, laakiin lama huraan in horumarka uu haddana dib u billowdo.
Seddexda ChEIs ee sida weyn loo isticmaalo, rivastigmine iyo galantamine waxaa kaliya oo ay u ansixisay FDA infekshanka Alzheimer ee khafiifka ah ama dhexdhexaadka ah, halka atepezil loo ogolaaday cudurka Alzheimer ee fudud, dhexdhexaad, iyo daran. Lama oga in rivastigmine iyo galantamine ay sidoo kale wax ku ool u yihiin cudurka daran ee Alzheimers, in kasta oo aysan u muuqan sabab macquul ah oo ay u diidayaan.
Dhibaatooyinka asaasiga ah ee ChEIs waxay ku lug leeyihiin nidaamka caloosha iyo waxaa ka mid ah lallabo, matag, casiraad, iyo shuban. Caadi ahaan waxyeelooyinkaan waxaa lagu xakameyn karaa iyadoo la beddelayo cabirka ama waqtiga qaadashada ama lagu qaato daawooyinka qadar yar oo cunto ah. Bukaannada intooda badani waxay u dulqaadan doonaan qiyaasaha daaweynta ee ChEIs.
Agon Qayb ka mid ah kuwa ka soo horjeeda glutamate-ka
Glutamate waa kan ugu weyn ee neerfaha gudbiya maskaxda. Hal aragti ayaa soo jeedineysa in glutamate aad u badan ay u xumeyn karto maskaxda ayna sababi karto xumaanshaha unugyada neerfaha. Memantine (Namenda) waxay u shaqeysaa iyadoo qeyb ahaan hoos u dhigeysa saameynta glutamate si ay u kiciso unugyada neerfaha. Daraasaduhu waxay muujiyeen in bukaanada qaar ee ku jira memantine ay naftooda u daryeeli karaan si ka wanaagsan bukaanada ku jira kiniiniyada sonkorta (placebos). Memantine waxaa loo oggol yahay daaweynta waallida dhexdhexaadka ah iyo daran, daraasadduna ma aysan muujin inay waxtar u leedahay waallida fudud. Sidoo kale waa suurtagal in lagu daaweeyo bukaanada AchEs iyo memantine labadaba iyada oo aan lumin waxtarka daawada ama kordhinta dhibaatooyinka soo raaca.
Ka sokow, daraasado badan ayaa muujinaya in daawooyinka J147, CAD-31, CMS 121, iwm ay waxtar u yeelan doonaan cudurka Alzheimer ee moodooyinka jiirka ee dardargelinta gabowga. J147 waa daawo tijaabo ah oo leh saameyn la soo sheegay oo ka dhan ah cudurka Alzheimers iyo gabowga moodooyinka jiirka ee dardargelinta da'da. Dhaqdhaqaaqa neerfaha ee kor loo qaaday ee J147 ee unugyada horudhaca neerfaha ee bini-aadamka ayaa leh soosaaradeeda oo loo yaqaan CAD-31.
Daaweyn ku saleysan dawo la'aan
Daawaynta ka sokow, isbeddelka hab-nololeedka ayaa caawin kara bukaanka cudurka alzheimers
maaraynta xaaladooda, sida aqrinta buugaagta (laakiin ma ahan wargeysyada), ciyaarida ciyaaraha looxyada, dhameystirka xujooyinka ereyada, ciyaarida qalabka muusikada, ama isdhexgalka bulshada ee joogtada ah waxay muujineysaa halista dhimista cudurka Alzheimers.
Matthews, KA, Xu, W., Gaglioti, AH, Holt, JB, Croft, JB, Mack, D., & McGuire, LC (2018). Qiyaasta isirka iyo jinsiga ee cudurka Alzheimers iyo waallida la xiriirta ee Mareykanka (2015 - 2060) ee dadka waaweyn ee jira 65 sano. Cudurka Alzheimers & Dementia. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.06.3063 astaanta dibedda
Xu J, Kochanek KD, Sherry L, Murphy BS, Tejada-Vera B. Dhimashada: xogta ugu dambeysa ee 2007. Warbixinta tirakoobka qaranka ee muhiimka ah; vol. 58, maya. 19. Hyattsville, MD: Xarunta Qaranka ee Tirakoobka Caafimaadka. 2010
Cudurka Alzheimers - Sababaha (NHS)
Patterson C, Feightner JW, Garcia A, Hsiung GY, MacKnight C, Sadovnick AD (Febraayo 2008). "Baadhista iyo daaweynta waallida: 1. Qiimeynta halista iyo kahortagga asaasiga ah ee cudurka Alzheimer". CMAJ. 178 (5): 548-56
McGuinness B, Craig D, Bullock R, Malouf R, Passmore P (Julaay 2014). "Statins loogu talagalay daaweynta cudurka waallida". Macluumaadka Cochrane ee Dib u Eegista Nidaamka
Stern Y (Julaay 2006). "Kaydka garashada iyo cudurka Alzheimer". Cudurka Alzheimer iyo Cilladaha La Xiriira. 20 (3 Qalabka 2): S69-74
"Daawada tijaabada ah ee lagu bartilmaameedsanayo cudurka Alzheimers waxay muujineysaa saameynta gabowga" (War-saxaafadeed). Machadka Salk. 12 Nofeembar 2015. Waxaa dib loo helay November 13, 2015